Mid ka mid ah diyaaradaha waxduqeeya ee duuliye la’aanta ah oo Muqdisho ku dhacday – SBC
Mid ka mid ah diyaaradaha waxduqeeya ee duuliye la’aanta ah oo Muqdisho ku dhacday
Sarkaal Somaali ah ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha duuliye la’aanta ah ee wax duqeeya ay ku soo dhacdey magaalada Muqdisho maalinimadii Jimcada sida uu qorey website-ka idaacada ku hadasha codka Mareykanka ee VOA qaybta English-ka, isla markaana ay baahisay wakaalada wararka ee AP.
Ma aanu sheegin sarkaalku cida adeegsanaysay diyaaradaasi waxaase uu sheegay in diyaaradu ay ku soo dhacdey agagaaraha safaarada Liibiya ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Ilo wareed oo codsadey inaan magacooda la sheegin ayaa sheegay in diyaaradaasi burburkeedii ay qaateen ciidamada AMISOM & koox rag ah oo aan la cadeyn haybtooda.
Dawlada Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in ay u adeegsanayo Soomaaliya diyaaradaha wax duqeeya ee bilaa duuliye ah, iyagoo taageero siinaya ciidamada dawlada & kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira xoogaga Shabaabka.
Ma jiro wax war ah oo baahsan oo dawladu Mareykanku ka soo saartey warka ku aadan adeegsiga diyaaradaha wax duqeeya ee aan Pilot-ka laheyn.
Dhinaca kale sida ay qortey wakaalada wararka ee AP wariye ka tirsan ayaa wuxuu sheegay in indhihiisa uu arkay burburka diyaaradaasi, isagoo sheegay in ay ula muuqanaysay diyaarad yar
Al-Shabab dhawaan waxay sheegteen inay ka baxeen magaalada Muqdisho ka dib markii ciidamada AMISOM & kuwa Dawladu ay dagaaladii ugu dambeeyey ka awood bateen, balse saraakiil ayaa aaminsan in wali Shabaabku ay ku sugan yihiin magaalada.